Xanuunkii Gabadhayda “Sheeko Gaaban” BY:Ismaaciil C.qaadir Ismaaciil “Maslax | Somaliland Today
← Dhibaatooyinka Uu Qaadku Dhaliyo: Qalinkii Nimco Faysal
UCID xisbi qaran baa la moodayay ee ma xisbi qabiil buu noqday maxay se Gabiley ka yidhaahdeen dadba wada yaab ye by Abdi Mustafe →
Xanuunkii Gabadhayda “Sheeko Gaaban” BY:Ismaaciil C.qaadir Ismaaciil “Maslax
Wadar iyo waaxid ma kala maqnin oo waxanu wada fadhinaa qolka fadhiga ee aqalkii carruurtayada inta yar yari ay ku dhasheen. xitaa islaantaydu way nala fadhidaa oo anay dheega igu haysaa oo sidii dhal daanyeer laabta igaga jiiftaa. Waa maalin ciideed oo hooyaday ayaan soo booqanay. Inkasta oo aanan ooridayda carruur isku dhalin laakiin immika ayay ilmo caloosha ku sidaa. Malaa waa sababta ay dheega iigu hayso ee ay dadkii kale ee ehelka ahaa ugasoo irdhawday. HAA waa wallac oo hooyaday ayaa ii sheegtay oo tidhi “haka fogaan, wax macmacaan usoo qaad, mar kasta ka ag dhawaw oo haka dheeraan. Xitaa haddii adiga oo hurda ay tashti ama dhariba kula dul timaad haka cadhoon”. Waa markii iigu yaabka badanayd intii aanu is qabnay oo sannadba iska ah. Intaa ay dadku sheekaysanayaan ee sharaabayaan aniga iyo ooridaydu waanu isku mashquulsan nahay. Alla yaa sannadkaba sidaa ka dhiga. Hooyaday ma yaabanee laakiin walaalahay iyo ehelkii kalaa yaaban oo is leh ninkii Axmed-dayax miyuu waashay. Waxa i haysta ma moogiye ilamaha dhalan doona ayaan is leeyahay yaanu bilaa jacayl ku dhalan.
Jimcihii dhawayd markii aan salaada kasoo baxay ayay wadada igaga hor timi iyada oo labisan, Markii aan waydiiyay xagge aadaysaana waxay igu tidhi “hudheelka ayaan kasoo qadaynanaa ee ina mari”. Jeebkayga shilin laguma ogayn marka ay sidaa i leahayd. Iyadana waan ogahoo anaaba baankeeda. Run ahaantii waan naxay oo qosol gariiray sijaayadiina iga dhici gaadhay. Waa igu qasab wax kasta oo igalasoo gudboonaada. Inta aan gacanta soo qabtay ayaan ku idhi “ oo yaa teenana inoo cunaya” waxay iyada oo indhaha igu gubaysa tidhi “ haddaad diiday lacagta uun isii anaa kaligay tagiye”. Aniga oo afkana ka qoslaya uurkana ka ooyaya ayaan aqalka tagay oo soo xidhay surwaal iyo shaadh bilaa kaawiyada, yaa wax ii kaawuyadayn sawtan tii noo kaawiyadayn lahayd nalagu dac darreeyay. Markii ba waan soo baxay iyada oo bas gundhada u fadhida. Ninkii baska ayaan ku idhi “i sug aan dukaankaa lacag kasoo qaatee”. Intii aan ninkii dukaanka ka baryayay lacagta amaahdaa ayuu kii baskuna i raagsaday oo iska dhaqaaqay. Markii aan kasoo faro maroojiyay waxoogaagii ayaan soo istaagay wadadii waaba gaadhigii oo jiirta kasii dhaadhacaya. Taleefankeedii ayaan garaacay oo waxaabuu ka dhacaya meel igu beegan oo halkaasaabay taagan tahay. Xageeda intaan u dhaqaaqay ayaan kaftan runtuna aanay ka madhanayn kula kaftamay. Iyada oo qoslaysa iyo aniga fikirsan ayaa baskii kornay. Suuqa ayuu nagu tuuray hadana mid labaad ayaanu raacnay oo isna nagu tuuray hudheel laga cunteeyo hortii.
Markii aanu hudheelka sidaa u galnay ayaa kalluunkii lagu samaynayay u soo uray inta ay isasoo malamashaya ayay tidhi “ huteelkan sidan u uraya cunadiisuna ka daran”. Maalinkaasi wuu dhib badnaaye haalkibaan hadana sasabaad iyo qancin galay. In badanan ayaan halkaa taagnayn anna aan hadal waday iyaduna waxan ku idhaahba diidaysay, gadaashii se way ogolaatay laakiin waxay shardi ku xidhay inaan cuntada anuu gacantayda kagasoo qaado madbakha hudheelka. Hawraarsan ayaan kusoo kexeeyay. Mutule uu miis dhexyaal kuraasina ku wareegsan tahay ayaanu galnay oo ku hubsaday dabadeedna u dhaqaaqay xagaa iyo madbakhii la ii diray. Isla markiiba waxaa igasoo hor baxay mudalabkii hudheelka. Waan istaajiyay oo u sheegay waxa jira iyo in la ii ogolaado inaan anigu gabadhayda mudalab u noqdo. Wauu iga yeelay inkasta oo aan wajigiisa ka dareemayay shaki baahsan. Waa yeelkii oo ha iska yaabsanaado. Madbakhii oo muntulayaasha dabadooda ayaanu aniga iyo mudalabkii ka wareegnay oo madbakhii dalaq wada nidhi oo kala door doortay cunadii, mayee u kala door dooray ooridayda. Waan cararay oo soo dhaafay murulayaan badan oo soo abbaray kay fadhiday dabadeedna hor dhigay cuntadii. Way ursatay oo sidii neef carraysan inta ay dhinacyada ka taataabatay iskasoo durkisay oo xagayga usoo riixday.
Maalinkaas waxaasaa iga qabsaday. Sidaasay ii bacad joojisay hadana aanay waxba u cunin illayn hadday wax ii cunto waaban ka ladi lahaaye manaan xasuusteen inaanbacadkaa maree. Waxba yaanan calaacaline dhibka haysta ana u gaystay markaa waa inaan ka samato bixyaa. waa inaan la jihaadaa oo ilaa foosha aanan ka ag dhaqaaqin. Alla foosha ayuun baa ugu daran. Miskiinta allahayoow u fududee. Maalinka xageen istaagaa? Kuwan dhakhaatiirta ahina waa kuwo madax adag oo noo ogolaan maayaan inaan qolka ay ku umulayso ugu galee. Alla maalinkaa ilaahayoow i gaadhsii meel uun baan istaagiye.